RASMI: Kooxda Tottenham oo afar bilood kaddib shaqada ka cayrisay Tababare Nuno Espírito Santo – Gool FM
RASMI: Kooxda Tottenham oo afar bilood kaddib shaqada ka cayrisay Tababare Nuno Espírito Santo
Haaruun November 1, 2021
(London) 01 Nof 2021. Kooxda kubadda cagta Tottenham ee ka dhisan Waddanka Ingiriiska ayaa shaqada ka cayrisay Tababaraheedii Nuno Espírito Santo kaddib kaliya afar bilood oo uu shaqadaasi hayey.
Kulankii ugu dambeeyey ayay ee ay ciyaartay Kooxda Tottenham horyaalka Premier League ayay guuldarro weyn oo 3-0 ah kala kulantay Manchester United, iyadoo lagu ciyaaray garoonkeeda.
Bayaan ay soo saartay Kooxda Spurs laguna daabacay Website-ka rasmiga ah ee kooxda ayay ku shaacisay inay albaabka u tilmaamtay Tababare Nuno Espírito Santo.
War-saxaafadeedka ka soo baxay Kooxda Tottenham ayaa u dhignaa: “Naadigu waxa uu maanta ku dhawaaqi karaa in Nuno Espírito Santo iyo shaqaalihiisa tababarka ee Ian Cathro, Rui Barbosa iyo Antonio Dias laga qaaday xilkii.
Fabio Paratici oo ah agaasimaha kubadda cagta kooxda ayaa dhankiisa yiri: “Waan ogahay inta Nuno iyo shaqaalihiisa tababarka ay rabeen inay guuleystaan, waxaana ka qoomameynayaa inaan qaadannay go’aankan.
“Nuno waa mid leh karti run ah, mar walbana waa lagu soo dhaweyn doonaa halkan, waa inaan u mahadcelinnaa isaga iyo shaqaalihiisa tababarka, waxaana u rajeyneynaa wanaag mustaqbalka.”
Spurs sidoo kale waxa ay qoraalkeeda ku shaacisay in hoggaamiyaha beddeli doona Nuno la shaacin doono waqtiga ku habboon.
Dhinaca kale Di Marzio ayaa bartiisa Twitter-ka ku soo qoray in shaqada Kooxda Tottenham uu la wareegi doono Conte kaddib markii la cayriyey Nuno.
Lionel Messi oo shaaciyey inuu dib ugu laabanayo Camp Nou: "Waxaan jeclaan lahaa inaan dib ugu laabto Barcelona"
Liiska xiddigaha uga qeyb-galaya Kooxda Barcelona kulanka UCL ee Dynamo Kyiv oo la shaaciyey… (Dembele oo soo laabtay & Aguero oo…)